ငြိးသံလေး | CeleTrend
လေဆိပ် က နေ အရိုက်ဗယ် ကို ထွက် လိုက်တာနဲ့ မ ကို တွေ့ ရတယ်၊ ကို ရယ် ..လွမ်းတယ် ကွာ.. ကို လည်း တူတူ ပါပဲ မရယ် မ ကို လွမ်းနေတာဟင်း တွေ့ တော့ မှ ပိုပြ နေတာလား.. ကို စကား မပြောတော့ ပါ၊ မ ကိုယ်လေး ကိုပဲ ထွေးပွေ့ ပြီး မ နူတ်ခမ်း နုနု လေး တွေကို သူ့ နူတ်ခမ်း အစုံ နဲ့ ဖိကပ် နမ်းလိုက်တယ်၊ မ ရဲ့ နူတ်ခမ်း အစုံ ကလည်း အားတက် သရော တုန့်ပြန်လာတယ်၊ ကိုက မရဲ့ အောက်နူတ်ခမ်းလေး ကို ဆွဲ စုပ် လိုက်ပြီး မှ ပါးစပ်ချင်း ခွာလိုက်တယ်၊ ကို ဗိုက်ဆာ နေမှာပေါ့ ….လာလာ တခါထဲ ၀င်စားလိုက်ရအောင်ဟင့်အင်း ကို က မ ကို ပိုဆာနေတယ် ဟော်တဲ ကို အရင် သွားကြရအောင်ကွာမ က သူပိုပြီ ဆိုတဲ့ မျက်စောင်းလေး နဲ့ ထိုးလိုက်ပြီး ကို့လက်ထဲ ကိုသူ့ ကားသော့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်၊ ဒီတခါတော့ ကို က လမ်းသိနေတာမို့ လေဆိပ်က ထွက်လာတာနဲ့ မြို့ ဆီကို သွားတဲ့ ဖရီးဝေး ပေါ် တခါထည်း တန်းတန်းဖြောင့်ဖြောင့် ၀င် သွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီတခါ ဟော်တယ်က အသစ် တခု မှာ အရင် နေ့ ထဲက လမ်းကြည့်ထားတဲ့ မ လမ်းညွှန်တဲ့ အတိုင်း မောင်းလာခဲ့တယ်၊ ဟော်တယ် လော်ဘီမှာ နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ကြည့် ပြီး သော့ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်၊ မ နဲ့ ကို နဲ့ တယောက် ခါးတယောက် ဖက်ပြီး ဓါတ်လှေခါးထဲ ၀င်ခဲ့ကြတယ်၊ ဟော်တယ် အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ ကိုယ်က ပါလာတဲ့ ကျော်ပိုးအိပ်ကို ကြမ်းပေါ် ပစ်ချ၊ ပြီး မ ပုခုံးပေါ်က စလွယ်သိုင်း အိပ်ကလေး ကို အခန်းထောင့်က ကုလားထိုင်မှာ သွားတင်လိုက်တယ်၊ မ နဲ့ ကိုနဲ့ တယောက်ကို တယောက် တအားဖက်ပြီး နူစ်ခမ်းချင်း ဖိကပ် လို့ ၊ ရမက်လှိုင်းထန် တဲ့ အနမ်းတွေ နဲ့ အငမ်း မရ နမ်းမိကြတယ်၊ နောက် ကိုက မ အင်းကျီ ကြယ်သီး ကို ချွတ်မလို့ လုပ်တော့ မက ခန တားပြီး၊ ကို .. မ က ကို့ ကို လွမ်းတာလည်း ကြာ ပြီ မ လည်း အရမ်းဆာနေပြီ ..မ ကို အရင် အလှည့်ပေး.. ကိုက ဘာပြောရမှန်းမသိ ကြောင်နေတုန်း မက ကို့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ကို့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ကြယ်သီးကို ဖြုတ်၊ ဇစ်ကို လည်း ဆွဲ ဖြုတ် ပြီး ပေါင်လည် ထိ ဆွဲချလိုက်တယ်၊ နောက် တော့ ကို့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို လည်း ဂျင်းဘောင်းဘီ ဆွဲချထားတဲ့ နေရာထိ တွန်းချ လိုက်တယ်၊ ကိုကောင်ကြီးက ဖြောင်းကနဲ ထွက်လာတာပေါ့၊ မက သူ့ လက်ကလေး နဲ့ အသာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး သူ နူစ်ခမ်းလေး နူစ်ခုကို ဟ လို့ ကို့ ဒစ်ထိပ်ဖူး ကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ အ..အားကာင်းလိုက်တာ မ ရယ်၊မကတော့ နွားကလေး သူ့ အမေ့ နိူ့ကို စို့ သလို အားရ ပါးရ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးနေတော့တယ်၊ ကို ရဲ့ ကောင်ကြီးက မတရားတောင် လာတာမို့ မ ရဲ့ အာဂေါင်လေး ကို သွးထိုးမိ တော့ မ ခမျာ အော့ ချင်သလို ဖြစ်သွားတယ်
အင်..မ ဖြစ်ရဲ့လား ..ထိပ်လေး တင် စုပ်လေ မ.. မ က သူ့ ပါးစပ် ထဲက ကို့ လီးကြီး ကို ခန အပြင် ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအင်း ပါ၊ ဟို တခါက ပါးစပ်ထဲ မှာ အပြီး စုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောထားတယ်လေ၊ကို ပဲ မ ပါးစပ်ထဲ မှာ ပြီးချင်တယ် ဆို.. ..အင်း ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်လေ မ .ဒါပေမဲ့ ကိုနဲ့ မ က မတွေ့ရတာ ကြာပြီး အခု မှ ပြန်တွေ့ရတာ တွေ့တွေ့ချင်း တော့ မ အဖုတ်လေး ကို လုပ်ချင်လို့ ….ဟွန့် ဒါဆိုရင် လည်း သဘောပဲကဲ ကိုက ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲ. ..ကဲ ကို က ပထမ ဆုံး နူတ်ဆက် ပွဲ ကို အချိန် မဆွဲချင်တော့ ဘူး၊ မ ဟိုဘက်လှည့် ကုတင်ပေါ် မှာ မှောက်လိုက်၊ တတောင် ထောက်ထားလိုက်၊ … မ က ကိုပြောသလို လုပ်နေတုန်း ကို က မ စကဒ်လေး ကို လှန်ပြီး အောက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်တယ်၊ မ ရဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်က ဒီအတိုင်း ဆန့်ဆန့် ရပ်နေတဲ့ အတိုင်း ထားလိုက်ပြီး မ ရဲ့ ဘယ်ဘက် ခြေထောက်ကို ဒူးကွေး ပြီး ကုတင်မွေ့ယာပေါ် တင်လိုက်တယ်၊ မ ပေါင်ကြားက ဟ သွားတဲ့ နောက် မှာ ကိုရပ်လိုက်တယ် ၊မ ပေါင်ခွဆုံ က အဖုတ်လေး ကို ကို့ လက်ဖ၀ါးနဲ့ ကိုင် လိုက်တော့ အရည်တွေ က ရွဲနစ်နေ တာပဲ၊ ကို ဘာမှ နူးစရာ မလိုတော့ ဘူး ဆိုတာ သိရတော့ ကို့ကောင်ကြီး ကို မ အဖုတ်ဝ မှာတေ့ လိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ဖြေးဖြေး ချင်း ဖိသွင်းလိုက်တယ်၊ အိုး မရဲ့ စောက်ခေါင်း အသားလေး တွေက နွေးထွေးပြီး နူးညံ့ နေတာပဲ၊ အရသာ ရှိလွန်းလို့ ကို ဖြေးဖြေးချင်းပဲ အ၀င်အထွက် စလုပ်ပေးနေမိတော့တယ်၊ မရဲ့ လက်တွေက မွေ့ယာခင်းကို ဆုပ်ကိုင် ပြီး မ ဖင်လေးကို ကော့ကော့ ပေးလာတာတွေ့တော့ မ ဆန္ဒ ကို သိတဲ့ အနေနဲ့ ကို က အသွင်းအထုတ် ကို မြန်မြန်လုပ်ပေးတော့တာပေါ့၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် သွက်သွက်ကလေး လိုးနေမိတာပေါ့၊ မရဲ့ ဖင်သားလုံး နူစ်လုံးနဲ့ ကိုယ့်ပေါင်ခြံ တို့ တဖတ်ဖတ် ရိုက်မိတဲ့ အသံက ဟော်တယ်ခန်းက အဲယားကွန်း အသံကို ဖုံးလွှမ်းနေတယ်လေ၊ ခနနေတော့ ကို့ လီးကြီး က တအားယားလာပြီး ကို ပြီးချင်လာပြီလေ၊ ….မ ကို ..ပြီးချင်လာပြီ ပြီးလိုက်ရမလားဆိုတော့ မ က ခေါင်းပဲ ငြိမ့်ပြတယ်၊ ကိုလည်း နောက်ဆုံးဆောင့်ချက်တွေကို အားပါပါ မ ခါးလေး ကိုကိုင် ပြီး ဆောင့်ချလိုက်မိတယ်၊ အား.အို့. ကို့ရဲ့ လီးထိပ် က သုတ်ရည်တွေ မ ရဲ့ စောက်ခေါင်း ထဲ မှာ ဖြစ်ကနဲ ဖြစ်ကနဲ ထွက်သွားရပြီ၊ ကို က မ ကျောပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး မရဲ့ လည်တိုင် နဲ့ မေး လေး ကို နမ်းလိုက် မိတယ်၊ ကောင်းလိုက်တာ မ ရယ်မရော ကောင်းရဲ့လားဟင်.. .. အရမ်းကောင်းတယ်ကို …. တချီပြီးသွား တော့ ကို က ရေချိုးခန်းထဲ မှာ သွားပြီး ကို့လီးကြီး ကို ဆပ်ပြာမွေးတွေ နဲ့ သေခြာ သွား ဆေးလိုက်တယ်၊ နောက်က မလည်း လိုက်ဝင်လာတယ်၊ ကိုက ကို့လီးကြီးကို ရေချိုးခန်းက သဘက်လေး နဲ့ သုတ်နေတုန်း မက ရေချိုးခန်းမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ရှာဝါ ဟို့စ်နဲ့ သူ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ဆေးနေတယ်၊ ကို့လီးကြီး က ပြန်မာတောင်လာလို့ မ နားကို လျှောက်သွားလိုက်မိတယ်။
ကို အနားလာရပ်တာတွေ့ လို့ မက မော့ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ မျက်နှာရှေ့မှာ တည့်တည့် ကြီး ချိန်ထားတဲ့ ကို့လီးတန်ကြီး ကို တွေ့လိုက်ရတယ်၊ မ က အလိုက်တသိပဲ သူ့ ပါးစပ်တည့်တည့်ကို တိုးထ၀်လာတဲ့ ကို့ လီးကြီး အတွက် သူ့နူတ်ခမ်းတွေ ကို ဟ ပေးလိုက်တယ်၊ ကို့ ရဲ့ ဒစ်ကြီးက မ နူတ်ခမ်းလှလှ လေးတွေကြားထဲကနေ မ ပါးစပ်ထဲ ကို ထိုးဝင် သွားတယ်လေ၊ မက နူတ်ခမ်းကို ပြန်စေ့လိုက်တော့ ကိုယ့်လိင်ချောင်းပေါ်မှာ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လေး ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ ကိုက မ ခေါင်းလေးကို ကိုင်ထိန်းရင်း မ ပါးစပ်ကို စောက်ဖုတ်လေး လို လိုးသလို လိုးနေမိတော့တယ်၊ မ ကတော့ သဘောကောင်း လိုက်တာ၊ ကို့ကို ဘာမှကို မပြောဘူး၊ ကိုလုပ်သမျှကို ခံနေတော့တာပဲ၊ မနူတ်ခမ်းနူစ်ခု တင်းတင်း စေ့ထားတာရယ်၊ မ ရဲ့ ပါးစပ်က စုပ်အားတွေ ရယ်က ကို့ကို အကြာကြီး မထိန်းထား နိူင်စေပါဘူး၊ ကိုယ့်လီးတန်ကြီး ယားပြီး ပြီးချင်လာခဲ့တယ်၊ မ ကိုယ် ပြီးချင်လာပြီ ကွာလို့ ကို ကပြောရင်း မ ပါးစပ်ထဲက ကို့လီးကြီး ကို ဆွဲထုတ် မလို့လုပ်တော့ မက ကို့ လီးကြီး အရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ပါးစပ်ထဲ က ပေးမထုတ်ဘူး၊ ခေါင်းလေးကို ပဲ ရမ်းလို့ရသလောက် ရမ်းပြတယ်၊ မထုတ် လိုက်နဲ့တော့ပေါ့၊ ကို့ရင်ထဲ ပျော်သွားတယ်၊ ကို မရဲ့ ပါးစပ်ထဲ မှာ ပြီးချင်တယ် လေ၊ ဒါပေမဲ့ အားနာလို့ မ ကို မတောင်းဆိုရက် လို့လေ၊ အခုတော့ မ က ကို့ကို အခွင့်အရေး ပေးနေပါလား၊ နွေးထွေး နူးညံ့လှတဲ့ မ ရဲ့ အာခံတွင်း လေးရဲ့ အထိအတွေ့ ကို့ လီးထိပ် မှာ ခံစားရင်း ကို့ ရဲ့ အချစ်ရည်တွေကို တထုတ်ထုတ် နဲ့ ပန်းထုတ် လိုက်မိတော့တယ်၊ မ ရဲ့ ဆံပင်တွေကြားထဲ ကို့ လက်ချောင်းတွေ ထိုးထည့်ရင်း မ ခေါင်းလေးကို တင်းတင်းလေး ကိုင်ထိန်းထားမိလို့ မ လည်း လှုပ်လို့ မရတော့လို့လား မသိ အသက်ရူရ ပဲ ခက်လို့လားမသိ ကိုယ့် အချစ်ရည်တွေကို မ တဂွပ်ဂွပ်နဲ့ မျိုချပစ်လိုက်တာ ကို သတိထား မိလိုက်မှ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ အိုး ငါ သိပ်တရားလွန်သွားပြီလား၊ မ ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ကနေ ပျော့နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကို့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး မကို ဂျိုင်း နူစ်ဘက်က မ ပြီး ထူလိုက်မိတယ်။ မ မျက်နှာ ကို စိုးရိမ်တကြီး ကိုကြည့်မိတော့ မမျက်နှာလေး က ပြုံးနေတယ်၊ အိုး သိပ်ချစ်စရာကောင်းပါလား မရယ်၊ ကို မရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို အတင်းသိမ်းကျုံး ဖက်ထားမိတော့တယ်။ ဟော်တယ် ခန်းထဲက အဲယားကွန်းအေးအေး လေးကြောင့် ဘက်ရှိ အောက်မှာ တယောက်ကို တယောက်ဖက်ပြီး ၀င်ကွေးနေကြ ရင်းက ကို တရေးနိူးလာတယ်၊ ကို့လက်မောင်းတဘက်ပေါ်မှာ ပါးအပ်ရင်း အသက်မှန်မှန်လေး ရူအိပ်နေတဲ့ မ ကို ပါးကလေး ငုံ့နမ်းလိုက်မိတယ်၊ မ မျက်လုံးလေး ပွင့်လာတယ်၊ ကြောင်မလေး တကောင်လို လက်နူစ်ဘက် ကို ဆန့်သန်းရင်း အကြောဆန့် လိုက်တဲ့ မ ကို အသာထွေးဖက်ရင်း နူတ်ခမ်းလေး ကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ အောက်ပိုင်း မှာ ဘာမှ မ၀တ်ထားကြလို့ မ ပေါင်ချောမွတ်မွတ် လေးတွေနဲ့ ကို့ပေါင် တွေ ပွတ်မိနေတယ်၊ အိပ်ရေး နည်းနည်း ၀ သွားလို့ ထလာတဲ့ ကို့ကောင်လေးက မ ပေါင်နူစ်လုံးကြားကို နွေးနွေးကြီးနဲ့ ပွတ်သတ် တိုးဝင် သွားတယ်။
ကို က မရဲ့ ပေါင်တဘက်ကို ကိုယ့်ခါးပေါ် မတင်လိုက်ပြီး မ ဖင်သားကြီးတွေ ကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ကို့ ကိုယ်ဘက်ကို ဆွဲ ယူလိုက်တော့၊ ကို့ လီးထိပ် က မ အဖုတ်ဝလေး ကို သွားထောက်မိတယ်၊ အွန့် … မ ဆီက အသံလေး ထွက်လာတယ်၊ ကို က ကို့ လီး ကြီးကို အသာလေး ဖိ သွင်း မလိုလုပ်တော့၊ မ က ကို့ ရင်ဘတ် ကို အသာတွန်းထားရင်း ..ခန ကို မရှုး ပေါက်ချင်သေးတယ်ခိခိ..ဆောရီးနော်တဲ့. ..အင်း..ရပါတယ်.. ကို က မလွှတ်ချင်လွှတ်ချင်နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ရတယ်၊ မရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားတော့ နည်းနည်း အိုက်သလိုရှိလာတာနဲ့ မွေ့ယာပေါ်က ကွန်ဖေါ့တာ တွေကို ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ ကို့ကောင်ကြီးကတော့ အလံတိုင်ကြီးပေါ့၊ ကို့က ကိုယ့်လက်နဲ့ပဲ အသာလေး ပွတ်ပေးထားလိုက်တယ်၊ ခနစောင့် မင်း မမ ပြန်လာလိမ့်မယ် လို့ ချွေးသိပ်ပေးတဲ့သဘော၊ မ ရေချိုးခန်းထဲ က ပြန်ထွက်လာတော့ ကို တယောက် ကိုယ်လုံတီးနဲ့ မွေ့ယာပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး အလံတိုင် ကြီး ကို ပွတ်နေတာတွေ့ လိုက်ရတော့ ခစ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ ..ကိုဟာလေ ခနလေးတောင် မစောင့်နိူင်ဘူးလားတဲ့.. ကြာတယ် လာခဲ့ ကောင်မလေး.. မွေ့ယာပေါ် ဒူးထောက်တက်လာတဲ့ မ ကို ကျားသစ်က ကျွဲ ဖမ်းသလို အပေါ်က ခုန်အုပ်လိုက်တယ် ၊တကယ်တော့ စတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ လေးဘက်ထောက်လေး ဖြစ်နေတဲ့ မရဲ့ ကျော်ပေါ်က အုပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတော့ ကို့ ကောင်ကြီးက မ ပေါင်ရင်း ကိုထောက်မိ ပြီး မ ပေါင်ခွဆုံ ထဲ ကို ၀င်သွားတယ်၊ ရေဆေးထားလို့ စိုစိုစွတ်စွတ် ဖြစ်နေတဲ့ မ ရဲ့ စောက်ပတ် ၀လေးကို ၊ကို့လီးကြီးက တန်းတန်းမတ်မတ် ကို သွားထောက်မတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကိုလည်း ဖင်ကို အသာလေး ကော့ပေးပြီး လမ်းကြောင်းတည့်ပေးလိုက်တယ်၊ ကို့ လီးထိပ်ဖူးက မ စောက်ပတ် အ၀ လေးကို တိုးဝင်သွားတာနဲ့ ကိုက ဖိပြီး တွန်းထိုးသွင်းလိုက်တယ်၊ စိကနဲ မ စောက်ခေါင်းထဲကို ကို့ လီးတန်ကြီးက စီးစီး ပိုင်ပိုင် နဲ့ ၀င်သွားတယ်၊ ကို့ လီးကြီး မရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲ ၀င် နေပြီးတာနဲ့ ကိုယ်က မ ကျောပေါ် မှောက်လိုက်ပြီး မရဲ့ နိူ့ကြီး တွေကို တဘက်တချက်ကနေ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်၊ ပြီးတော့မှ အဲဒီနိူ့ကြီးတွေကို ဆွဲဆွဲ အားပြု ရင်း မစောက်ဖုတ်လေး ထဲ ကို ကိုလီးကြီးနဲ့ ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေမိတော့တာပေါ့၊ ဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ မြည်တာရယ် စွတ်ကနဲစွတ်ကနဲ အရည်သံရယ်က အခန်းထဲက အဲယားကွန်း အသံနဲ့ သူမသာ ကိုယ်မသာ ဖြစ်နေကြတယ်၊ အား မ ကောင်းလားဟင်၊ အခု ကိုလုပ်ပေးနေတာ ဟင့် မ က ဘာသံမှ မထွက်ပဲ နဲ့ ကြိတ်ခံနေမှာလား ခိခိ ကောင်းလို့ကြိတ်ခံတယ်မှတ်ပါ ကို က အခု ဖင်ထောင်ပြီး ဆော်နေပြီလေ အဲ ဖင်ထောင်ပြီး လိုးနေပြီပြောတာ ဟွန့် အရမ်းကြိုက်တယ် ..ကိုနဲ့ဒီလိုနေချင်တာကြာပီလေ မ က ဖင်လေးကို ကော့ပေးထားလေ အဲဒါမှ ကိုက ဖိပြီး ဆောင့်လို့ရမှာ၊ အဲ လိုဖင်ထောင်ကုန်းထားလိုက်ရင် မရဲ့ ဖင်လေးက လုံးနေတာပဲ ကားလဲ တက်လာတယ်။
ဒိတခါတော့ ဟိုတယ် ပြတင်းပေါက် အခန်းဆီး မပိတ်တာ မ ဘာမှ မပြောတော့ဘူး .. ..စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊ စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊ စွတ် ဆိုတာက မ အဖုတ်ထဲ မှာ အရည်ရွဲနေတော့ ကို့လီးကြီး ၀င်သွားတော့ မြည်သံ၊ ဖတ်က ကို့ပေါင်ခြံနဲ့ မ ဖင်လုံးကြီး ရိုက်မိတဲ့ အသံ ၊ အဲ တော့ မှန်မှန်ဆောင့်ရင် အဲ ဒီ အသံ မှန်းမှန် မြည်လာတာပေါ့ ခိခိ။ ကို ဘယ်လောက်တောင် အားကုန် ထည့်ဆောင့်မိလည်း မသိဘူး မ ကိုယ်လုံတခုလုံးရှေ့ကို ရွေ့ရွေ့ သွားလိုက်တာ မခေါင်းနဲ့ ကုတင် ဟက်ဘုတ် နဲ့ ထိနေပြီ၊ ခိခိ၊ ကိုကအရမ်းကြမ်းတာဘဲ …. ဒါမဲ့ ကြမ်းလေ ကြိုက်လေ မ ကလည်း ဖင်ကြီး ကို ရမ်းရမ်းပေးရင်း ပြန်ပြန်ကော့ပေးနေတော့ ကို့ လီးကြီးက မ စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံးထိ သပ်ရိုက်သွင်းသလို ၀င်ဝင်သွားသလို အထဲ နံရံတွေကိုလည်း မွေနှောက်နေသလို ဖြစ်နေ၇တာပေါ့၊ ..မ ..ပြီးကာနီးပလား..ကို ပြီးတော့မယ်.. ..မလဲပီးတော့မယ် . ကို မ အဖုတ် ထဲ မှာ ပဲ ပြီးလိုက်တော့မယ်နော် မ ပီးလိုက် ကို အ အ အ အ အားကို က ကို့ပေါင်ခြံကို မ ဖင်လုံးကြီးတွေ နဲ့ ဖိကပ်ထားလိုက်ပြီး မ စောက်ခေါင်းထဲ က ကို့လီးကြီးကိုပဲ ညှစ်ညှစ်ပြီးတော့ သုတ်ရည်ပူ ပူနွေးနွေး တွေကို မ စောက်ပတ်အတွင်းကျဆုံးနေရာတွေ ကို ပန်းပစ်နေမိတယ်၊ ဟူး….ကောင်းလိုက်တာ မရယ်၊ ချစ်တယ်နော် ကို့ကို …..မ နဲ့ ကို မတွေ့ရတာတောင် ၃ နှစ်နီးပါး ရှိသွားပြီနော်၊ မ တို့ မြို့နား ကို ကိုရောက်တော့ အရင် ကလို၊ မ ကို့ ဆီ လာတွေ့ဖို့ မဖြစ် နိူင်တော့ဘူးလေ၊ မ တို့ အိမ်မှာဝင်တဲ ဖို့ မ ကခေါ်တယ်၊ လာပါ ကိုယ့်မိတ်ဆွေပဲ ဟာ တဲ့ မကြည့်ပြောထားမယ် ဆိုလို့ မတို့ အိမ်မှာပဲ တည်းလိုက်တယ်၊ မ ခလေးလေး တောင် တနှစ်ပြည့်တော့မယ်၊ လေ၊ မလည်း ခလေး အမေ ဖြစ်သွားလို့လား မသိဘူး ၊ ကိုယ်ရည် စစ်သွားတယ်၊ နိူ့ကြီးတွေ ပဲ ပိုကြီးလာတယ်၊ အဟီး၊ ခလေး မွေးပြီးနောက်ပိုင်း ခလေး ကို ကြည့်ဖို့ တယောက်တလှည့် စီ တာဝန်ယူ ရအောင် ဆိုပြီး မ နဲ့ မ အမျိုးသား တို့ က နေ့ည အဆိုင်းလွှဲ ပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတယ်လေ၊ ကို ရောက်တဲ့ အချိန်က နေ့လည်ခင်း ဆိုတော့၊ မ အမျိုးသား နဲ့ ခလေး နဲ့ပဲ ရှိတယ်လေ၊ အင်း အခုကတော့ မ တို့ က အဖေအမေ နဲ့ အိမ်ခွဲ နေပြီ ဆိုတော့ မ တို့ အိမ်မှာ မတို့ မိသားစု ရယ်၊ မ ခလေး တဘက်နဲ့ ဆိုတော့ မ ညီမ ဝမ်းကွဲ တယောက်ပဲ လာနေ ပေးတယ်လေ၊ မ က အဲဒီ ညီမ ဝမ်းကွဲ ကို စည်းဝါးရိုက်ထားပြီး ပြီ ကို က မတို့ နဲ့ ဆွေမျိုး မကင်းပဲ ရင်းနှီးတဲ့ ရပ်ဆွေ ရပ်မျိုး ဆိုတာ၊ ပြောထားတာ ဆိုတော့ ကို မတို့ အိမ်လာတည်းရင် တမျိုး မဖြစ်အောင်လေ၊ ညနေဘက် ကျနော့် မ အမျိုးသား အလုပ်ထွက်သွားတော့ မ ညီမ ဝမ်းကွဲက ခလေး ကြည့်ပြီး ကျန်ခဲ့ တယ်၊ မ ညီမ က သူ့မျက်နှာ ပေါ်မှာ ဘာမှ အမူအယာ မပြပေမဲ့ ၊ကို က တော့ ဘယ်လို မျက်နှာထားရမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ နောက်တော့လည်း အသားကျ သွားပါတယ်။
ညနေ မ ပြန်ရောက်လာတော့ အရမ်း ဆွဲဖက် နမ်းချင်လိုက်တာ အသည်းယားနေတယ်၊ မ ညီမ ဝမ်းကွဲ ရှိနေလို့ ထိန်းနေရတယ်၊ ..ဟော ကို အဆင်ပြေလား..ဒီတခါ ဘယ်လောက်နေမှာလဲ..အင်း အဆင်ပြေပါတယ်..အလုပ်ကိစ္စလေး ပြီး ရင် ပြန်မယ်လေ ၂ရက် ၃ ရက်ပေါ့.မသားလေး ကို ကြည့်ပါအုန်း ခိခိ မ က သူ့ညီမ ဆီက ကလေးလေး ကို လှမ်းယူလိုက်ရင်း ပြောလိုက်တယ်၊ ..ကို ကြည့်ပြီး ပြီ ချစ်စရာလေး အမေနဲ့ တူလို့ထင်တယ်.. ..ခစ်ခစ် .. မ က မျက်စောင်းလေး တချက် လှမ်းထိုးလိုက်တယ်၊ ကိုက မ ညီမ နောက်ဘေးဘက် ထွက်သွားတာကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး သူ မကြားလောက်တဲ့ နေရာရောက်တော့၊ .. မ က ပို ချစ်စရာကောင်းလာတယ်..တသားမွေး တသွေးလှ ဆိုတာ အခု မှ သဘောပေါက်တော့တယ်.. ..ဟင့် ကိုကလဲကိုက မအနားကို တိုးသွားတော့ မက နောက်ဖေးဘက် လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး ..ကို ခနနေအုန်း ညီမလေးကို အပြင်ခိုင်းလိုက်အုန်းမယ်.. မ က ခလေး ချီပြီး နောက်ဖေးဘက်ကို ထွက်သွားတယ် ခနကြာတော့ သူရယ် သူ့ညီမလေး ရယ် ထွက်လာတယ်၊ ကို့ ကို တိုင်းရင်းသား စာ ကျွေးမလို့ ညီမလေး ကို သွားဝယ်ခိုင်းမလို့ အဲဒါ၊ ကိုကြိုက်တယ် မို့လား.. ..အင်း ကြိုက်ပါတယ်၊ ဟို အမဲသားနဲ့ ပဲဟင်းလား ခိခိ.. ..ဒီတခါ တမျိုးပြောင်းကျွေးမယ် ခိခိ.. မ က ကားသော့ယူပြီး အိမ်ပြင်ထွက်သွားတဲ့ သူ့ညီမလေး ကို သူတို့ ဘာသာစကားနဲ့ ပြောနေတယ်၊ ကလေးကတော့ အိပ်ပျော်သွားလို့ အခန်းထဲ မှာ ချထားခဲ့တယ် ထင်တယ်၊ မ ညီမလေး ကား မောင်းထွက်သွားပြီး မှ အိမ်ထဲ ပြန်လှည့်ဝင်လာတဲ့ မကို မအောင့်နိူင်တော့တဲ့ ကို ကသိမ်းကျုံး ဖက်ပစ် လိုက်တယ်၊ မ နူတ်ခမ်းတွေ နဲ့ ကို့ နှုတ်ခမ်းတွေဂဟေဆက်မိ ကြတယ်၊ ချိုမြတဲ့ မ နူတ်ခမ်း တွေကို မနမ်း ရတာ ကြာလို့ အားရ ပါးရ ကို စုပ်နမ်း ပြစ်လိုက်တယ်၊ မရဲ့ သိသိ သာသာ လုံးဝန်း ထွားမို့နေတဲ့ နိူ့ အစုံက ကို့ ရင်ဘတ်ပေါ် လာဖိနေတယ်၊ မ ဘရာဇီယာ ဝတ်မထားပါလား၊ ကိုက မ တီရှပ်ပေါ်က ပဲ နိူ့ကြီးတွေကို လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး အားမလို အားမရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်၊ ..အို့..ကိုရယ်.အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ.. ..လာ ဒါဆိုလည်း အိမ်ထဲ သွားမယ်လေကိုက ပြောပြော ဆိုဆိုပဲ ကို့ အတွက် မ ညီမလေး ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ အခန်းကို ဦးတည် လို့ လျှောက်သွားရင်း မလက်ကိုလဲ မလွှတ်တန်း ဆုပ်ကိုင် ဆွဲလာခဲ့လိုက်တယ်၊ အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ အခန်းတံခါးကို ပိတ် ကလန့်ချလိုက်ပြီး တာနဲ့ မ ရဲ့ တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကနေ မချွတ် ပစ်လိုက်တယ်။
အားပါး မ နို့ကြီးတွေက အားရ ပါးရပဲ ဖောင်းတင်းကား ပြီး နိူ့သီးခေါင်း ညိုညို ကြီး နှစ်ခုက ထောင်နေတယ်၊ ကို က ငုံ့ ပြီး အားရ ပါးရ စုပ်ပစ်လိုက်တယ်၊ အီး မေ့သွားလို့ မ က ကလေး နိူ့တိုက်ေ နတာကိုး၊ ကို့ ပါးစပ်ထဲ နို့တွေ ပန်းပြီး ဝင်လာတယ်၊ ခိခိ၊ ဘယ်ရ မလဲ မျိုချလိုက်ပြီး ဘယ် ညာ ပြောင်း စုပ်ပေးနေလိုက်တယ်၊ မ က တော တအင်းအင်း နဲ့ ကို ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဖွ နေတယ်၊ ခနနေတော့ မှ ကို့ ခေါင်းကို သူလက်နှစ်ဘက်နဲ့ ထိန်းမလိုက်ပြီး၊ ကို၊ အရမ်း မစို့ နဲ့လေ သား အတွက် မကျန်ပဲ နေအုန်းမယ်၊တဲ့၊ ကိုက ခေါင်းတချက် ငြိမ့်ပြရင်း၊ မဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အတိုလေး ကို ကြယ်သီး စဖြုတ်နေတော့တယ်၊ အိုး မရဲ့ အတွင်းခံ ခွဆုံ မှာ ရွှဲ လို့ပါလား၊ မက ကို့ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး ကို့ ကုတင်ပေါ် တွန်းပြီး ကုတင်စောင်းမှာ ခြေချ ထိုင်ခိုင်းတယ်၊ ကို ထိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ သူ့ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ တွေကို ဆွဲ ချ လိုက်တယ်၊ နောက် ကုတင်ခြေရင်း နားက ခလေး ကုလားထိုင်လေး တခု ယူလာပြီး ကို့ ပေါင်နှစ်လုံးကြား ကြမ်းပေါ်မှာ ချ ပြီး ထိုင်လိုက်တယ်၊ ကို့ ဒူး နှစ်လုံးကို သူ့ နိူ့ကြီးတွေနဲ့ ဖိ ပြီး၊ ကို့ ဒစ်ဖျားကို သူ့ နူတ်ခမ်းလေး တွေ ဝလုံးပုံ လုပ်ပြီး ငုံလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ အသာလေး စုပ်ပေးရင်း မှ ခေါင်းကို အပေါ် အနိမ့် အမြင့် လုပ်ပေးလာတယ်၊ သူ့ နုတ်ခမ်းလေးကိုလည်း ကို့ လီးချောင်းတန် မှာ တင်တင်း စိလို့ လုပ်ပေးတော့ ကို့ မှာ အဖုတ်ကို လုပ်နေရသလိုပဲ ပေါ့၊ ထူးခြားတာကတော့ သူ့ ပါးစပ်က အတွင်းက လျှာကလည်း လှုပ်ရှားနေတာလေ၊ အား မ ရယ် ကို အဲဒီ အစုပ် ကလေး ကို လွှမ်းနေရတာလေ.. ကျနော် စ တာကို သိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကျနော့် ပေါင်ကို သူ့လက်သည်းလေးနဲ့ မနာအောင် လာဆိတ် သေးတယ်၊ အစုပ်ကတော့ မပျက်ဘူးပေါ့၊ မ ရဲ့ နွေးထွေး လှတဲ့ အာခံတွင်း ထဲက နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့ တွေကို ဇိမ်ခံရင်း မ ရဲ့ တပြွတ်ပြွတ် စုပ်ပေးနေရှာတဲ့ မရဲ့ ဆံပင်လေး တွေ ကို ပွတ်သတ် ဆော့ကစားနေမိတယ်၊ မတွေ့ရတာ ကြာလှပြီး ပထမဆုံး ပြန်တွေ့ရတာ မို့ မ ကိုလည်း အရသာ ရှိစေချင်တယ်လေ၊ လျှာ အရ သာ မဟုတ်ဘူး ၊ အဟီး ဟိုအရသာပေါ့၊ အဲဒါကြောင့် မ နဖူးလေး ကို တွန်းပြီး မော့လာတဲ့ နဖူးလေး ကို နမ်းလိုက်တယ်၊ ..တော် ပြီ မရယ် အခု ပထမဆုံး အချီကိုတော့ မ အဖုတ်လေး ထဲ မှာပဲ ပြီးချင်တယ်နော်.. မ က ခေါင်းညိမ့်လိုက်ပြီး ထလာတယ်၊ ကိုက ကုတင်စောင်း မှာ ထိုင်နေရာက ထလာလိုက်ပြီး ကိုယ်ထိုင်သလို မကို ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်၊ မရဲ့ ပေါင် နှစ်လုံးကြားမှာ ကို ဝင်ရလိုက်တော့ မက ဒူးထောင် ပေါင်ကား အနေ အထား လုပ်ပေးလိုက်တယ်၊ ကိုယ့် လိင်ချောင်းကြီးက တငေါက်ငေါက် နဲ့ မ အဖုတ်ဝကို တိုးဝင် သွားပြီလေ၊ အား ကောင်းလိုက်တာ မရယ် အိနွေးနေတာပဲ၊ ကိုပြောခဲ့ တဲ့ အတိုင်း ဆရာဝန်ကို သေခြာချူပ်ခိုင်းထားတယ် ထင်တယ်၊ေးစေးကျပ်ကျပ် ကလေး၊ ကို့ လိင်ချောင်းကြီး တိုးဝင်သွားတာ ကို မ လည်း အရသာ ကောင်းကောင်း တွေ့သွားတယ် ထင်တယ် မျက်လုံးလေး မှေးလို့။
ပထမ တချက် နှစ်ချက်ကို ဖြေးဖြေး ချင်း သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် အရှိန်ယူ ပြီး မှ တဖြည်းဖြည်း ချင်း အမြန် ဆောင့်လာမိတယ်၊ ….ဖွတ်..ဖတ်..ဖွတ်..ဖတ်.. ..အိ..အား..အိအား.. နောက်ဆုံးတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ဖီးတွေတက်လာပြီး တော့ တဖုန်းဖုန်းကို ဆောင့်လိုး ပစ်နေမိတော့တယ်၊ နောက်ဆုံး မ ကိုယ်လေး တွန့်တက် ပြီး ကို့ ကို တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် လေး ဖက်လာတော့ ကိုလည်း မအောင့် နိူင်တော့ ပဲ လီးကြီး ကို မ စောက်ဖုတ် ထဲ အဆုံးထိ ဆောင့်ထိုးချလိုက်ပြီး အထဲ ထဲ မှာ သုတ်ရည်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ပန်ုးထုတ်နေမိပါတော့တယ်၊ ပြီးသွားပေမဲ့ မာနေသေးတဲ့ ကို့ လီးကြီးကို မ စောက်ဖုတ်လေး ထဲ စိမ်ထားနေမိတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲ မသိဘူး၊ မ က၊ ..ကို..ခန ထတော့ ..တော်ကြာ ညီမလေး ပြန်လာ တော့မယ်..ညကျ မှ ကို့ ဆီ လာခဲ့မယ်နော်.. ..အင်း မ..အရမ်းကောင်းတာပဲ မရယ် မချစ်ရတာ ကြာပြီလေ.. ကျနော့် လီးကြီးကို ဖြွတ်ကနဲ နေအောင် မ စေက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ် လိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ကောက်ဝတ်လိုက်တယ် မ လည်း အင်းကျီ ဘောင်းဘီ တွေ ပြန်ဝတ် ပြီး နှစ်ယောက်သား ထွက်လာ ကြတော့၊ ဟောဗျာ၊ မ ညီမလေး ဘယ်အချိန်ထဲက ပြန်ရောက်နေသလဲ မသိ၊ မီးဖိုထဲ မှာ သူဝယ်လာတဲ့ အစားအသောက် တွေကို ခွက်တွေ ပုဂံတွေ ထဲ ပြောင်းထည့်နေတာ တွေ့ရတယ်၊ ကျနော် မျက်နှာပူလိုက်တာ၊ အင်း၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ။ မ ရဲ့ နို့တွေ တဝ စို့ ရပြီး မ စောက်ဖုတ်လေး ကို လုပ်ရပြီပဲ ကျန်တာက ဘာအရေးကြီးသေးလဲ လို့ တွေးနေမိ ပါတယ်၊ …ညကျတော့ ဟန်ဆောင် ပန်ဆောင် နဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ တီဗီ ထိုင်ကြည့်ပြီး စကားပြောနေကြ ရင်း မ ရဲ့ ညီမလေး အိပ်ယာ ဝင် မဲ့ အချိန် စောင့်နေကြတယ်၊ မ နဲ့ ကို နဲ့ က ပြောထားပြီးပြီ ၊ ကို့ အခန်းကို ပဲ မလာမယ်၊ မ အခန်းထဲ ကိုလာခဲ့ လို့ အခန်းထဲ ဟို အနံ့ တွေ စွဲနေရင် မ အမျိုးသား သံသယ ဖြစ် သွားမှာ စိုးလို့လေ၊ မ ကို ကြည့်ရင်း နဲ့ ကိုက တဖြေးဖြေး တင်းလာလို့ ကို၊ ခရီးပန်းလာလို့ အိပ်ယာစောစော ဝင်တော့ မယ် ဆိုပြီး အခန်းထဲ ဝင်လာ ခဲ့လိုက်တယ်၊ အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲ ရင်း မ ဘယ်အချိန် ရောက်မလဲ စောင့်နေရင်း က အိပ်မောကျ သွားခဲ့တယ်၊ ကို့လီးကြီး မှာ စိုစို စွတ်စွတ် နဲ့ စုပ်နေတဲ့ ဖီလင် ကြောင့် နိူးလာတော့ အခန်းထဲ မှာ မီးက မှောင်ပိန်းနေတယ်၊ ညက အခန်းထဲ မှာ မီးလုံးက အခန်းအလည်က မျက်နှာကျက် မှာပဲ ရှိ ပြီး ခလုပ်ကလည်း အခန်းပေါက်ဝ ဝင်ဝင်ချင်း မှာပဲ ရှိတာ သိပေမဲ့၊ အပြင်ဘက်က အလင်းရောင်တွေ ဝင်နေလို့ အခန်းက သိပ်မမှောင်ဘူး လိုပဲ၊ အခုကတော့ ဘာမှ ကို မမြင်ရဘူး။
ဒါပေမဲ့ မှောင်ထဲ မှာ ကို့ရဲ့ လီးကို စုပ်ပေးနေတာ ခံလို့ကောင်းကောင်းနဲ့ ခံနေလိုက်မိတယ်၊ မီး မရှိတာလည်း ကောင်းတာပဲ၊ တခြားလူတွေ မသင်္ကာ မဖြစ်တော့ ဘူးပေါ့၊ အား၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ လီးချောင်း အထဲက တောင် စစ် စစ် ဖြစ်သွားတယ်၊ အားရ ပါးရ စုပ်လိုက်တယ်ထင်တယ်၊ ဒီတခါတော့ ပါးစပ်ထဲ မှာ ပဲ ပြီးလိုက်တော့မယ် လို့ စိတ်ကူးလိုက်တယ်၊ အရသာ ကောင်းကောင်းကို အဆုံးထိ ယူလိုက်မယ်ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကလည်း သူ့ကို ပြန်ပေးချင်တယ်လေ၊ အဲဒါနဲ့ ကို့လီးကြီးကို သူ့ပါးစပ် ထဲက မကျွတ်စပဲနဲ့ ကိုယ်ကို တဖြေးဖြေး ချင်း လှည့်လိုက်ပြီး သူ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြား ကို ဝင်လိုက်တယ်၊ ရွဲစိုနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးက ကို့ မျက်နှာပေါ် ရောက်လာတယ်လေ မှောင်ထဲ မှာ ဘာမှ မမြင်ရ ပေမဲ့ လျှာက စမ်းရင်းနဲ့ အကွဲ ကြောင်းထဲကို ရောက်သွားတယ်၊ ကို့ လီးကြီးကို စုပ်တာ ပိုကြမ်းလာတယ်၊ နောက် ပါးစပ်ကို လည်း တင်းတင်း စိရင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင် ကွင်းတိုက် ပေးလာတယ်၊ ကို လည်း ပေါင်လုံးကြီး နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်ရင်းက ပါးစပ်ပေါ်ကို မှောက်ကျ နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပဲ အားရ ပါးရ ရက်နေမိတယ်၊ စောက်ဖုတ်က လည်း အရည်တွေ တအားရွဲနေတော့ ကိုယ့်မေးစေ့တွေပေါ်တောင် ရောက်လာတယ်၊ ကို့လျှာကလည်း စောက်ဖုတ် နံရံတွေ၊ စောက်စေ့တွေ နေရာ အနှံ့ကို ထိုးဆွ ရက်ဆော့နေမိတယ်၊ မကြာခင်မှာပဲ သူ့ကိုယ်လုံး လေး တောင့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား တွေက ပွစိပွစိ ဖြစ်လာတော့ ပြီးနေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်လို့ ကို့ လီးကြီးလည်း ကော့ဆောင့်လိုက်ပြီး သူ့ ပါးစပ်ထဲ ကို သုတ်ရည်တွေ တဖျောဖျော လွှတ်ထုတ် ပေးနေ မိပါတော့တယ်၊ သူ က အိပ်ယာပေါ် ကို့ အချစ်ရည်တွေ မကျအောင် ပါးစပ်ကို အတင်း စိထားပြီး တတ်နိူင်သလောက် မျိုချလိုက်ပြီး မှ ကို့ လီးကြီးညှစ်နေတာ ရပ်သွားမှ ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ ပိတ်ပြီး အနောက်ဖေးဘက်ကို ပြေးသွားတော့တယ်၊ သူ ဘေစင်မှာ သွားထွေးပြီး ဆေးမလို့ ထင်ပါရဲ့ လို့ တွေးရင်း အသာလေး မှိန်းနပ်နေရာက ပြန်အိပ်ပျော်သွားပြန်ပါတယ်၊ နောက် ခလေး ငိုသံ လိုလို ကြားတော့ မှ ရုတ်တရက် နိုးလာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျိန်ဆဲ မိတယ်၊ ဟိုက် ငါက အရေးထဲ အိပ်ကောင်းနေတယ်၊ အချိန်က နောက် ၂ ည ပဲ ကျန်တော့တယ်၊ အခွင့်ရေး ရတုန်း လေး ချစ်ရတာ၊ ဆိုပြီး အိပ်ယာက ထပြီး မတို့ အခန်းရှိရာ လျှောက်လာခဲ့မိတယ်။
“ မ ခလေး ငိုနေတာလား “ “ အင်း ကို နို့ဆာလို့ထင်တယ် “ “ ကျန်သေးတယ် မဟုတ်လား အဟီး “ “ ခစ်ခစ် ကျန်ပါတယ် ကိုကလည်း “ မ က ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ရက်နဲ့ တီရှပ်ကို လှန်ပြီး ခလေးကို နို့တိုက်နေတယ်၊ ကောင်လေးက အိပ်မော ပြန်ကျ သွားပြီထင်တယ်၊ မျက်လုံးပိတ်ထားရင်း ပါးစပ်ကတော့ ပြွတ်စ်ပြွတ်စ် နဲ့ စို့နေတယ်၊ ကိုက အခန်းတံခါးကို အတွင်းက ဂျက်ချလိုက်ပြီး တော့ ကုတင်နားလျှောက်လာခဲ့တယ်၊ “ သူက နိူ့ဗူး စို့နေပါပြီ၊ တခါတလေ အမေနိူ့ စွဲချင်ရင် ဂျီကျ တတ်တာ .. ကို ဟို ခရစ် တဲက နိူ့ဗူးလေး ယူပေးပါအုန်း “ ကျနော်က ကလေး အိပ်တဲ့ ကုတင်လေး ပေါ်က နိူ့ ဗူးကို ယူပေးလိုက်တယ်၊ နောက် မ သူ့ခလေးကို နိူ့က ဆွဲချွတ်ပြီး နိူ့ဗူး ပြောင်းတတ် လိုက်တာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့် နေမိတယ်၊ နောက် မ က ခလေးကို ချီလာပြီး သူ့ကုတင်လေး ပေါ် အသာ ချလိုက်တယ်၊ သူ့ ခလေး ကို စောင်တွေ ဘာတွေ သေခြာ ဖိပြီးမှ ကို့ ဘက်လှည့်လာတဲ့ မ ကို ကို က ထွေးပွေ့ ပြီး မျက်နှာ အနှံ့ နမ်းရှုံ့ လိုက်တယ်၊ “ ကဲ ဟိုကလေး ပြီးတော့ ဒီကလေး ကိုတိုက်အုန်း၊ ချိုချို စို့ချင်လို့ “ “ ခစ်ခစ် ဒီကလေး ကြီးက အရမ်း စို့တာ နိူ့သီးခေါင်းတောင် ကျိမ်းတယ် သွား မတိုက်ဘူး “ “ မရဘူး စို့မှာပဲ ဟင့် “ “ ခစ်ခစ် ကိုကလည်း ကဲ လာ ကို့ အခန်းသွားရအောင် “ အဲ လိုနဲ့ ကိုနဲ့ မ တို့ အသာလေး ခြေဖွနင်းပြီး ကို့ အခန်းကို လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်၊ မ လက်ထဲ မှာတော့ အော်ဒီယို မော်နီတာလေး ပါလာတယ်၊ ခလေးငိုရင် ကြားရအောင်လို့လေ၊ ကို့ အခန်းတံခါး ပိတ်ပြီးတော့ မ နဲ့ ကို ကုတင်ပေါ် ရောက်သွား တယ်၊ “ မ ဆောရီးပဲ ကိုပင်ပန်းနေလို့ထင်တယ် ပြန် အိပ်မောကျ သွား တယ် “ “ မလဲ တူတူ ပဲ ၊ ခလေး ငိုသံကြားလို့ သွားကြည့် နို့တိုက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ် “ စကားပြောနေကြတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကိုနဲ့ မ နဲ့ က ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားကြပြီ၊ ကို့ ပါးစပ်တွေက မ နိူ့တွေ ပေါ်မှာ အငမ်းမရ စို့ ရင်း လက်တွေနဲ့ လည်း ဆုပ်နှယ်နေမိတယ်၊ ဒီတခါတော့ လှေကြီးထိုး ရိုးရိုး နဲ့ ကို ဇိမ်ဆွဲပြီး လိုးနေမိတော့တယ်။ လူက တရေးအိပ်လိုက်ရလို့ အားပြည့်နေတာကြောင့် လီးက မာတောင်တောင့်တင်းနေ တယ်၊ ညဦးပိုင်းကလည်း လုပ်ထားတာမို့ တော်တော်နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး၊ အိထွေးနွေး နေတဲ့ မ စောက်ခေါင်းထဲက အသားနုနုတွေကို လီးချောင်းတခုလုံးနဲ့ ပွတ်နေတာကို ခံစားမိနေရတယ်။
ဆောင့်နေရတာ ညှောင်းသွားရင် ခနနားရင်း လီးကြီးကို စိမ်ထားလိုက်၊ မ မျက်နှာလေးကို ငုံ့နမ်းလိုက်၊ နူတ်ခမ်းချင်းစုပ်လိုက်၊ အိတင်းနေတဲ့ မ နို့ကြီးတွေအပေါ်မှာ ကို့ ရင်ဘတ်ကို ဖိထား မှောက်နားနေရင်းက၊ အညှောင်းပြေ အမောပြေ တော့ ပြန်လက်ထောက်ကိုယ်ကို ကြွပြီး ဆောင့်လိုက်နဲ့။ နောက်ဆုံး မ ဖင်ကြီးတွေ ကေကာ့ တက်လာပြီး ကိုယ့်ကို လာဆွဲချနေတော့ မ ပြီးကာနီးပြီ ဆိုတာသိလို့ ခပ်သွက်သွက်ပဲ မနားတမ်းဆောင့်ပေးလိုက်မိတယ်။ မကြာခင်ပဲ မကိုယ်လုံးလေး တောင့်တင်းပြီး ပြီးသွားတော့ ကိုယ်လည်း ညှောင်းသွားတာနဲ့ မ ကိုယ်ပေါ်မှောက်ချပြီး နားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကောင်ကြီးက တော့ တောင့်တင်းနေတုံးပေါ့။ မ စောက်ခေါင်းထဲက အသားလေးတွေ ပွစိပွစိ နဲ့ ကိုယ့်ကောင်ကြီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးနေတာ ဇိမ်ခံနေမိတယ်။ နောက်တော့ မ ကိုယ်လေးလဲ ပျော့ခွေသွားတယ်။ မ က ကိုယ့်ကိုယ်လုံးကို တင်းတင်းလေး ဖက်ရင်း ကိုယ့်မျက်နှာအနှံ့ နမ်းရှုံ့လိုက်တယ်။ “ကို မပြီးသေးဘူး မဟုတ်လား” “အင်း.. ရပါတယ်မ ရယ်” “မ စုပ်ပေးမယ်လေ” “ရပြီ မ စုပ်ပေးတာ ဘယ်နှယ်ခါရှိပလဲ တော်ပါပြီ ကိုအားနာတယ်” “ဟာ ကိုက လည်း ဘာအားနာတာလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့စကားတွေ” “ဆောရီးကွာ ကို စကားရှာမရတာ၊ မ ပါးစပ်ထဲ ကို နှစ်ခါရှိနေပြီ မလား ပြီးထားတာ” “အင်း ကို ဟိုဟာ လုပ်ချင်သလား၊ မ မှာ ကွန်ဒန်ရှိတယ်လေ၊ ဂျယ်လည်းရှိတယ်” “အင်း မ သေခြာလား” “အင်း သေခြာတယ်၊ မ ဒီတခါ ကို့ကို ပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား၊ နာအောင်မလုပ်နဲ့” “မ အမျိုးသားရော မတောင်းဘူးလား” “ခစ်ခစ် တောင်းတာပေါ့၊ ရွံစရာကြီးလို့၊ နာမှာကြောက်တယ်လို့ နောက်မှ ဆိုပြီး အထိမခံထားဘူး၊ ကို့ကို ပဲ ပထမဆုံး လူဖြစ်စေချင်လို့” “အာ့ကြောင့် မ ကို ချစ်နေရတာပေါ့” “မ ကလည်း ကို့ကို ချစ်လို့ ပေးတာပါနော့် ဟွန်း” မ အိပ်ယာက ထသွားပြီး တော့ ခနနေတော့ ပြန်လာတယ်။ ကွန်ဒန်ထုတ်ကို ဖေါက်ပြီး ကို့ ကောင်ကြီးမှာ လာစွပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ သွားတိုက်ဆေးတောင့်အတိုလေးလို လုဘရီကေးရှင်း ဘူးကလေးပေးတယ်။ နောက်တော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဖင်ဗူးတောင် ထောင်ပေးထားတယ်။ မ ရဲ့ ဖင်လုံးကြီး နှစ်လုံးက ဖင်ဗူးတောင်း ထောင်လိုက်တော့ ပိုပြီး လုံးကား စွင့်ထွက်လာသလိုပဲ။ မ ဖင်လုံးကြီး နှစ်လုံးကြား ကို။ လု ဘူးကလေးကို ညှစ်ထည့်ပြီး လက်ထိပ်ကလေးနဲ့ ခရေပွင့် ကလေးကို လိမ်းပေးလိုက်တယ်။
နောက် အထဲကို ဝင်သလောက်ထိုးထိုးပေးတယ်။ ကို့ လက်ချောင်းကလေးနဲ့တောင် ကျပ်နေသလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ ချောဆီနဲ့ ဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ခရေပွင့်လေးက သိပ်မတင်းတော့ဘူး။ နောက် လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ကရိုင်းလို့ ရသွားတော့မှ ကို့ ကောင်ကြီးကို တေ့လိုက်တယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ မလောပါဘူး။ တရစ်ချင်း ဖိသွင်းပေးတယ်။ မ ဆီက ငြီးသံလေး တခါကြားရင် ခနနားတယ်။ အပြင်တော့ ဆွဲမထုတ်တော့ဘူး။ ငြီးသံလေး ရပ်သွားရင် နည်းနည်းဖိသွင်းတယ်။ အဲလိုနဲ့ မ တင်သားတွေနဲ့ ကို့ ပေါင်ခြံ ဖိကပ်မိတဲ့အထိ ထိုးထည့်ပြီးတော့မှ မ အသားကျ သွားအောင် စောင့်နေလိုတယ်။ “မ အဆင်ပြေလား” “အင်း ပြေတယ် ကို နည်းနည်းတော့ နာတယ်” အဲတော့မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ခရေပွင့်ကလေး ရဲ့ တင်းကျပ်မှု က ကို့ လိင်တန်ပေါ်မှာ တရစ်ချင်း ညှစ်ကိုင်ထားသလို စေးစေးလေးနေတယ်။ အရမ်းကြီး အကျပ်မဟုတ်ပေမဲ့ သိသိသာသာလေး တင်းနေတယ်။ ကိုယ့် ကွမ်းသီးခေါင်း မထွက်လာခင်မှာပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့် အကြော တွေပေါ်ကို ညှစ်ထားတာလေးကို အာရုံခံစားရင်းက မ ရဲ့ အိတုံ တဲ့ တင်သားတွေ ကိုယ့်ပေါင်ခြံမှာ အိကနဲ လာကဖြစ်တဲ့ထိ ထိုးပြစ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ အဲဒီ အိတုံနေတဲ့ တင်သားတွေ ရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့်ပဲလား လိင်တန်အရင်းမှာ ညှစ်ထားသလို ဖီးလေးကို ပဲ ကြိုက်လို့လား မသိ။ ခပ်သွက်သွက်လေး အဝင်အထွက် ဆောင့်နေမိတယ်။ မ ဖင်လုံးကြီးတွေကလည်း အငြိမ်မနေတော့ဘူး အနောက်ဖက်ကို ပြန်ပြန်ကော့ပေးလာတယ်။ ကိုယ့်လက်တွေက မ ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး အားပြု ဆောင့်လိုက်တော့ မ ဆီက တအီးအီးငြိးသံလေး ကြားရတယ်။ ကိုယ့် လက်တဖက်ကို မပေါင်အရှေ့ကနေ အောက်ကို လျိုပြီး မ အစေ့လေးရှိရာကို စကစားလိုက်တော့ မဖင်ကြီးတွေ ပိုလှုပ်ခါလာတယ်။ ကို့ကောင်ကြီးလည်း ပိုကြီးပြီးမာလာသလိုပဲ။ မ အသံတွေ ကျယ်လာတယ်။ “အား ကို…… ကို… မ….မ….” မ စကားကို အဆုံးမသတ်နိုင်သလို ကိုယ်လည်း ပြောစရာစကားမရှိတော့ပါ။ ကိုယ့်ပြွန်ထဲက နေ တလိမ့်လိမ့်ဖြစ်လာတဲ့ ဖီလင်။ ကွန်ဒန်ထဲမှာ လွတ်ထည့်ရအောင်ကလည်း နှမြော တော့ ကွန်ဒန် အရင်း လိင်တန်ပေါ်က နေ ဆုပ်ကိုင်ရင်းက ကို့ကောင်ကြီးကို ခရေပွင့်လေးထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကောင်ကြီး ကွန်ဒန်ထဲက လွတ်ကျွတ်ထွက်လာတာနဲ့ နောက်လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး မ ဖင်နှစ်လုံးကြားမှာ အမြှောင်းလိုက်တင်ပေးလိုက်တယ်။ အမြောက်ကနေ ကျည်ဆံထွက်သလို ကိုယ့်ကောင်ကြီးထိပ်က လရည်တွေ တဖတ်ဖတ် နဲ့ မ ကျောလေးပေါ်ကို ထွက်ကျကုန်တယ်။ “အား” “အီး” “ကောင်းလိုက်တာ မရယ်”